I-China Empty Amber Glass Spray iibhotile ezinamalebheli (ii-2 Pack) -i-16oz yokugcwalisa kwakhona isikhongozelo seoyile eziBalulekileyo, iimveliso zokucoca, okanye iAromatherapy- isiXhobo seStrigger esimnyama soGuquguqukayo w / u-Mist kunye noVimba woSeto lwefektri kunye nabaxhasi | Jin Guan Yuan
I-Empty Glass Spray yeebhotile ezineebhalbhu (ii-2 Pack) -Izicoci ezingafunekiyo ze-16oz zeeoyile eziBalulekileyo, iimveliso zokucoca, okanye iAromatherapy- Isicwangcisi esimnyama esimdaka
2 IPHAKATHI-UKHUSELEKO lwe-UV-lukhusela ekonakalisweni kukukhanya kwe-ultraviolet kwaye lugcina iioyile zakho ezifanelekileyo zikhuselekile kunye neglasi ayichaphazeleki zioyile ezinamandla ezifana ne-citrus. I-BPA KUNYE EMAHLA.
2 IPAKI-DESIGN ENKULU ilungile esandleni sakho kodwa inkulu ngokwaneleyo ukuba akusayi kufuneka uyigcwalise rhoqo. Ibukeka intle kwaye yomelele ngesitshizi esithembakeleyo sokutshiza. Kubandakanya ii-2 zeCAPS kunye ne-4 SALLY'S ORGANICS LABELS.
Gcina imali, uncede indalo, kwaye unciphise iikhemikhali zeplasitiki endlwini yakho ngombane ococekileyo ongasetyenziswanga wamachiza kuzo zonke iziqwengana zolwelo zakho.
HLALISELA nantoni na oyenzayo ekhaya. Ukusetyenziswa okungenamkhawulo kubandakanya ukudibanisa abacoci bakho, isitshizi sokutshiza njenge-anculents okanye amayeza, isitshizi selineni yasekhaya yokutshiza, isitshizi sokunyibilikisa iinwele, ukutshiza okungeyonto inetyhefu, iifafaza zezilwanyana ezinamaphiko okanye ivumba, ifreshener yomoya wendalo yendlu, umgangatho okanye ikhaphethi yokucoca, iviniga kunye nomxube wamanzi wokucoca iiwindows, zokucoca ubuso ebusweni, ukuhlamba imifuno, igumbi lokuhlambela kunye nolusu olwenziwe ekhaya kunye nezinto zokupheka zobuhle.
Yakhelwe ubomi ngenxa yokuqina kwayo. UKUJONGA ENYE ngoku kwaye ukuba awonelisekanga ngokupheleleyo ngenxa yaso nasiphi na isizathu, nceda uqhagamshelane nathi kwaye siya kuyibuyisa ngovuyo imali yakho!
I-Amber Glass Spray Ibhotile
I-Ergonomic, i-nozzle yesitshizi esinokutshintshwa ngesitshizi ngeSple, ukuShukumisa kunye nokuCima useto. Kubandakanywa ii-Phenolic Caps ezivumela ukuvuza okungafumaneki, ngaphandle koxinzelelo. Iglasi ye-amber entle ibukeka entle kumboniso kunye ne-UV ikhuselekile.
Ikhuselekile kwaye ithembekile
Ukuthintela ivumba leplastikhi kunye neekhemikhali ukuba zingangeni ezibhotileni. Zive unentembelo kunye ne-PBA-free cap kunye nezinto ezibangela uchuku. Iglasi ehlala ixesha elide isinyithi simahla kunye nenqanaba lamayeza.
Yenza eyakho i-DIY, iimveliso zezinto eziphilayo. Yonga imali ngokunciphisa ukusebenzisa iiplasitiki ezilahlayo. Nceda indalo esingqongileyo ngokusebenzisa iiglasi kwakhona.
Edlulileyo: Ivenkile enkulu yeglasi ekhaya imifuno yeziqhamo isitya dessert isaladi ekhitshini ikhitshi elitsha isaladi isitya kwifriji entsha
Okulandelayo: Ikhaya iGrips ephezulu yeGlasi ityuwa okanye i-Pepper Grass, Ibhotile yeXabiso lomzimba weGlasi
Iglasi yeBhotile yeZithambiso, Ibhotile ye-cosmetic, Iglasi yezipho zeglasi, Iiglasi zeCosmetic zeGlasi kwiibhotile zeoyile, Iglasi yeJar Cosmetic, Iseti yeBhotile yeZithambiso,